Ajụjụ - BENFA Technology CO, LTD.
Gịnị mere anyị pụrụ hazie akpa igwe inye samples?
ndị ahịa si edoghị ụzọ chepụta ndiiche
Ụfọdụ ndị ahịa na-adịghị egosipụta n'ụzọ doro anya na ha okwu. Ụfọdụ nwere aha dị iche iche na nghọtahie site na ụlọ ọrụ. Nke a pụrụ iduga deviations na omenala imewe nke ala na-akpa ígwè ọrụ. Ọ bụrụ na e nwere ngwaahịa n'omume, ndị na-egbu oge mere site ogbenye nkwurịta okwu nwere ike belata.
ikpe nke na ngwaahịa bụ ihe kpọmkwem
Ụfọdụ ngwaahịa, n'ihi na nke ha pụrụ iche na usoro Ọdịdị, ghara e kpọtụụrụ ya emeputa n'ihu. Ọ bụrụgodị na ha na-n'ụzọ doro anya kwuru, sị ha, ha ga-enwe ike iji ngwa ngwa ịghọta ụdị ngwaahịa ha na-. Ọ bụrụ na ha nwere ike inye ngwaahịa samples, ha nwere ike mma nyochaa ngwaahịa. Structural usoro, omenala imewe;
adaba tụnyere, sample
N'ihi na omenala na ngwaahịa, sample tụnyere dị mkpa. Na ikpe nke n'omume, na-emeputa nwere ike ngwa ngwa nyochaa ma zụrụ akụkụ izute mkpa, ma ndị na-emepụta na ngwaahịa izute chọrọ;
N'ihi na ahịa ndị ahaziri ịkpa igwe, ọ kasị mma na-enye samples na emeputa kwesịrị iji na-emepụta. Ọ bụrụ na e nweghị ndị samples, enye ngwaahịa Eserese iwelata nkwurịta okwu mgbochi n'etiti abụọ ọzọ, ka ịkpa igwe emepụta na-emepụta ihe kacha mma mma ịkpa ígwè ọrụ.
Mmetụta Number nke ịkpa Machine na-ebu on Product Quality
The ọnụ ọgụgụ nke na-ebu maka elu-ọsọ ịkpa igwe bụ ihe ma ọ bụ na-erughị. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị na-Ịkpa otu ngwaahịa, ọnụ ọgụgụ nke ịkpa igwe spindles eji nwekwara ike ịbụ dị iche iche. The ọnụ ọgụgụ nke na-ebu ga-emetụta kpọmkwem na mgbagwoju anya nke ịkpa igwe Ọdịdị na ike nke Ịkpa ngwaahịa. Ke ofụri ofụri, na ukwuu ọnụ ọgụgụ nke ụgbọelu, ndị dị elu nke price nke ịkpa igwe na ihe kpọmkwem ịkpa ngwaahịa nwere ike. The ọnụ ọgụgụ nke ịkpa igwe ndị ahịa na-ahọrọ na-adabere na ndị a chọrọ maka ọdịdị na arụmọrụ nke braided ngwaahịa. Ka ihe atụ, braided hoses na-emepụta na-eji a waya ịkpa igwe. ịkpa igwe na a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke na-ebu na-n'aka na-emepụta mma braids na mma compressive ike. N'otu oge, ndị na-eri ga-elu. N'ihi na ihe niile na-akpa ákwà na ígwè ọrụ, ọnụ ọgụgụ nke ụgbọelu bụ ihe dị mkpa akwụkwọ maka àgwà nke ọrụ ha. The ọnụ ọgụgụ nke ịkpa ákwà igwe spindles ugbu a na-emepụta site Benfair Technology àmà site mgbe nile 24, 36 spindles ka a mgbagwoju 72.120 spindles. The ụdị ịkpa igwe emepụta na-adabere na ahịa si mkpa.